रुपाटार , बैशाख १७
उदयपुरको ताप्ली गाउँ पालिकाका सम्पुर्ण वडा कार्यलय , स्वास्थ्य कार्यलय तथा माध्यमिक बिद्यालयमा बिद्युतिय हाजिरी सुरु भएको छ । गाउँपालिकामा रहेको सप्पुर्ण वडा कार्यलय , स्वास्थ्य कार्यलय , माध्यमिक बिद्यालय सहित १७ सरकारी कार्यलयमा बिद्युतिय हाजिरी संचालनमा आएको छ ।
बिद्युतिय हाजिर जडान भएका माध्यामिक बिद्यालयमा महेन्द्र मा.बि.रुपाटार, मा.बि.कटहरे, फुस्रे मा.बि. पिपलभन्ज्याङ, ककनिश्वर मा.बि.ठानागाउं, मा.बि.ताप्ली चिसापानी , मा बि. झिल्केपोखरी रहेका छन । त्यसैगरी पालिकाका ५ वटै वडा कार्यलय र स्वास्थ्य कार्यलयमा पनी बिद्युतिय हाजिरी संचालनमा आएको बताइएको छ ।
बिद्युतिय हाजिरी संचालनमा आएपनी सबै स्थानमा बिद्युतको सुबिधा नहुदा सोलारबाट बिद्युतिय हाजिरी चलाउनु पर्ने अबस्था रहेको बताइएको छ । आगामी बर्ष आधारभुल बिद्यालयमा समेत बिद्युतिय हाजिरी संचालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष उद्धबसिंह थापाले जानकारी दिनुभयो ।